Qiimaha korontada oo cirka isku shareeray - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qiimaha korontada oo cirka isku shareeray
La daabacay måndag 18 januari 2016 kl 17.00
Laan barafowday. Sawirle: Anders Wiklund / TT
Dalka Sweden ayuu qabowgii halkiisii ka sii socdaa, halka dhanka kale uu aad kor ugu kacay qiimaha korontadu. Biilka korontada ee bishan jannaayo ayaa noqon doona mid ka sarreeya qaar badan ee ka mid ah guryaha lagu nool yahay.
Guryaha ku yaala nawaaxiga gobolka Stockholm iyo koonfurta Sweden ayay dhici kari doontaa inuu biilka bishan jannayo ee korantadu kor u kaco 60 boqolkii, sida uu qoray war-geeyska maalinlaha ee Svenska Dagbladet.
Bilihii ina dhaafay ayuu biilka korontadu ahaa mid runtii hooseeya, hase yeeshee kolka ay hawadu qobowdo ayay kor u kacdaa isticmaalka isticmaalka korontadu, waana waana sababta uu kor ugu kaco biilka korontaduna. Qiimaha korontada ayaa gaarsiisnaa 15-kii bishan jannaayo 54 öre kiiloowaat saacaddiiba, halka uu qiimahaasi bilowgii sannadka uu ahaa 15 öre kiiloowaat saacaddiiba.
Dhanka kale haddii uu qabowgu halkiisa ka sii socdo ayaa in muddo ah la bixin doonaa sicir sarreeya ee biilasha korontada. Waxaa iyaguna sidoo kale saameeyn ku yeelaneya qiimaha korontada biyaha iyo shirkadaha quwadda korontada ee nukliyerka ku shaqeeya.
Digniintii shirkadda tamarta ee Vattenfall iyo in albaabbada loo laabo wakhtigii loogu talo galey ka hor qaar ka mid ah warshadaha tamarta korontada ee quwadda nukleyarka, waxay sidoo kale saameeyn ku yeelaneyaan qiimaha korontada. Awoodda soo saarka tamarta korontada Sweden ayaan haddaba ku fillaan doonin kolka uu yimaado qabowgii ugu xumaa, sida uu qoray war-geeyska Svenska Dagbladet.
Xilligan eynu ku jirno ayuu biilka korantadu kor u kacay 57 boqolkiiba guud ahaan dalkan Sweden.